Windows 10 မှာဂျပန်ဂိမ်းကိုဘယ်လိုတပ်ဆင်မလဲ။ - အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
အဓိက > အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ > ဂျပန်ဂိမ်းများကိုကစားခြင်း - ဖြစ်နိုင်သောဖြေရှင်းနည်းများ
Windows 10 မှာဂျပန်ဂိမ်းကိုဘယ်လိုတပ်ဆင်မလဲ။
နှိပ်ပါWindowsသင်၏ကီးဘုတ်ပေါ်ရှိ X ။
Control panel ကိုရွေးချယ်ပါ။
Add language ကိုနှိပ်ပါ။
၁၄ .ပြီ 2021
ဤမေးခွန်းနှစ်ခုကို Mymobile ဂိမ်းဆောင်းပါးအားလုံးတွင်အကြိမ်များစွာမေးခဲ့ပြီးပြီ။ ၎င်းတို့သည်ဂျပန်အက်ပ်များကိုမည်သို့ကစားရမည်နှင့်သင့်ကွန်ပျူတာတွင်မည်သို့ကစားရမည်နည်း။ ဤဆောင်းပါးတွင်နှစ် ဦး စလုံးဖြေကြားလိမ့်မည်။ ဆောင်းပါးယနေ့ညနှင့်သင်ကျွန်ုပ်၏ livestream တွင်ရှိနေသည် ဖြစ်၍ သင့်အားအနည်းငယ်နှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားလိုပြီးသင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ပထမဆုံးမည်သို့ကစားရမည်နှင့် ပတ်သက်၍ တိုက်ရိုက်ဆောင်းပါးသို့သွားပါစေသင်သိပါစေ။ ဂျပန်ဗားရှင်းဂိမ်းများကိုမည်သို့ကစားရမည်လဲကျွန်ုပ်သည် Android သို့မဟုတ်တစ်ခုခုကဲ့သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ၊ အကြောင်းမှာကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်လုပ်နိုင်သည်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်လုပ်နေတာကိုပြောဖို့ကြိုးစားနေတာကိုဆဲလ်ဖုန်းကိရိယာတစ်ခုကဲ့သို့လုပ်လိမ့်မည်။ ပြင်ပဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုမှအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ။ သင်၏ Android တွင်လည်းလုပ်နိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းသည် iOS တွင်အလုပ်မလုပ်တော့သေချာသည်။ ဒီပတ်ပတ်လည်မှာကြိုးစားဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့ကွန်ပျူတာမဟုတ်ရင်သင့်ကွန်ပျူတာပေါ်မှာကစားဖို့ပါ ဒီနေရာမှာ Android အတွက်အလုပ်မလုပ်နိုင်တဲ့လွယ်ကူတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ androids ကအရမ်းပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြစ်လို့ကစားနည်းကိုကစားတော့မှာပါ။ အဆင်ပြေကြပါစို့၊ ခင်ဗျား PC မှာဘယ်လိုကစားရမလဲဆိုတာနဲ့စကြပါစို့။ သင်၏ PC တွင်ကစားနိုင်သည့် application များမှာကျွန်ုပ်ကြိုက်နှစ်သက်သော Droid 4x ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အလွန်လွယ်ကူသည်။ အထူးသဖြင့်အနိုင်ရခဲ့သည့် KingdomHearts Unchained X ကစားခြင်းမှအပမည်သည့်အရာအတွက်မဆိုငွေပေးစရာမလိုပါ။ အကြောင်းပြချက်အချို့ကြောင့် Droid 4x ကိုဒေါင်းလုပ်ချပါ။
ကျွန်ုပ်သည်ကွန်ပျူတာတစ်လုံးဟုတ်မဟုတ်ကျွန်ုပ်မသိသော bug တစ်ခုနှင့်တူသည်။ Droid 4x သင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့ရာကိုသင်မသိပါ။ နောက်တစ်ကြိမ်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်သို့မဟုတ် Droid 4x ကိုလုပ်ရန်ကြိုးစားပါ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်အတွက်တကယ်အလုပ်မလုပ်ပါ၊ ၎င်းသည်သင့်အတွက်ကြိုးစားကောင်းပြုနိုင်ပါလိမ့်မည်။ သို့သော်သင်ဤဂိမ်းအတွက်အလုပ်လုပ်သောအခြား application တစ်ခုမှာ BlueStacks ဖြစ်ပြီး BlueStacks၊ BlueStacks နှင့် ပတ်သက်၍ တစ်ခုတည်းသောအရာ တစ်လကိုဒေါ်လာ ၃ ဒေါ်လာပေးရမယ်ဒါမှမဟုတ်တချို့အက်ပလီကေးရှင်းတွေကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်ဖို့တောင်းတယ်၊ နောက်မှဖျက်ပစ်လို့ရတဲ့အက်ပလီကေးရှင်းတွေကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်လို့ရတယ်၊ တခြားပလက်ဖောင်းတွေအများကြီးရှိသေးတယ်၊ ကွန်ပျူတာနှင့်၎င်းသည်ဤပလက်ဖောင်းများကိုသင် download ဆွဲသည်ကိုသိရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းတို့သည် kini Mart SunChien X ကိုအသုံးပြုရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၌ပြသနာတစ်ခုရှိသေးသည်ကိုငါပြပါလိမ့်မည်၊ သို့သော် App Store သို့သင်မည်သို့ကူးပြောင်းနိုင်သည်၊ များသောအားဖြင့်များသောအားဖြင့်သူတို့တွေဟာသူတို့အတွက်မဟုတ်တာကိုအားရကျေနပ်စေပါတယ်။ 4x သင်ရုံဂိမ်းအားလုံးဂိမ်းအများစုအလုပ်လုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုငါမသိတဲ့ app store ကိုသွားနိုင်တယ်။ ရှားပါးတဲ့အချိန်တွေမှာဒီလိုအဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်တတ်တယ်။ ငါအမှားဆိုတာဘာလဲဆိုတာငါသိတယ် ငါကတွက်ကြည့်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲ့တာက 4x ဆွဲပြီးပုံမှန်အားဖြင့်တော့အလုပ်ဖြစ်တယ်။ ပြီးတော့ BlueStacks က BlueStacks ပဲ။ ဒါပေမယ့် BlueStacks တွေက Tina Motts Nginx အတွက်တော်တော်လေးကိုကောင်းပါတယ်။ ဒါ့အပြင်ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့တာကိုတွေ့ရမယ်၊ ဒါပေမဲ့အခုဂျပန်မှာရှိတဲ့အက်ပလီကေးရှင်းတွေကိုကစားကြရအောင်။ ကွန်ပျူတာဂိမ်းကစားခြင်းကဲ့သို့မည်သည့်အပလီကေးရှင်းမဆိုသင်မည်သို့ပြုလုပ်နိုင်သည်ကိုကွဲပြားခြားနားသောနည်းလမ်းများစွာရှိသည်။ ဒါကြောင့်ဒီ app တွေထဲကတစ်ခုပဲ။ ဒါက KU app လို့ခေါ်တဲ့ android ဂိမ်းပလက်ဖောင်းဖြစ်တယ်။ အဲဒါကိုဘယ်လိုကောင်းကောင်းအသံထွက်ရမလဲမသိဘူး၊ ဒါ့အပြင် qapp ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့်သင့်ဒေသကိုလည်းပြောင်းလဲဖို့နည်းလမ်းတွေရှိတယ်။ ဒီလိုမျိုးတစ်ခုခုဖြစ်ပေမယ့်ဒီဟာကအလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းပဲ၊ သင် download လုပ်ခဲ့တဲ့အပြင်ဘက်ကဘာပဲဖြစ်ဖြစ် KU app q app ကိုဒေါင်းလုပ်မချခင်ငါပြောခဲ့သလိုပဲသင်လုပ်ရမဲ့အချက်ကအလွယ်ဆုံးနည်းပဲ အကယ်၍ သင်သည် 'Install' ကိုနှိပ်လျှင်၎င်းသည်အဆင်ပြေပါသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည် BlueStacks အတွက် BlueStacks နှင့်သက်ဆိုင်သည်။ သင်တွင် BlueStacks ရှိရန်လိုအပ်သည်။ သို့သော် o ကိုနှိပ်ပါသောအခါကျွန်ုပ်ရရှိပြီးဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်မပေါ်ပါ။ သင် AndroidMarketplace တွင်တိုက်ရိုက်ထွက်မရနိုင်သောကြောင့်၎င်းကို၎င်းသည် BlueStacks မှတစ်ဆင့်တပ်ဆင်လိမ့်မည်။ ၎င်းကိုသင် unzip ရန်လိုအပ်ကောင်းလိုလိမ့်မည်။
ငါအရမ်းလွယ်တယ်လို့ဆိုလိုတယ် သင်ဘာလုပ်ရမည်ကိုသင်သိသမျှကာလပတ်လုံးဤလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဖြတ်သန်းခြင်းသည်အလွန်လွယ်ကူပြီးလုံးဝခက်ခဲသည်မဟုတ်ပါ။ ဒါကဝဘ်ဆိုက်ပါ
ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်ကဒီမှာပါ။ သင်ပေးရတာတွေအားလုံး၊ ဂိမ်းတွေနဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမင်းမြင်နိုင်ပါတယ်။ BlueStacksokay သို့သွားပါ၊ ဤတွင် BlueStacks ဖြစ်သည်၊ Q app ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ ၎င်းသည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် application playbut ငါသီးခြား tab ကိုထပ်ပေါင်းထည့်လိုသည်။ ဒုတိယအချက်အားငါပြမည်။ သို့သော် Monsters Strike ကဲ့သို့ဂိမ်းများကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်နိုင်သည့်ဂိမ်းများအားလုံးရှိသည်။ Monster StrikeEnglish Version Good Putt သင်ဟာ Monster Strike Jap Anversion ကိုကူးယူနိုင်ပြီး FrontierJapan ဗားရှင်းကိုလည်းဆုတောင်းနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့သောအရာများကိုရှာဖွေ။ ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် Kingdom Hearts I'm Shane X ကိုကျွန်ုပ်ရှာဖွေခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်၏ Kingdom Hearts Unchained X မြင်ကွင်းကိုလည်းမွမ်းမံသည်ကိုသင်မွမ်းမံပါက J နှင့် X တွင်သင်၏နိုင်ငံတော်အမှတ်အသားကိုအဆင့်မြှင့်နိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်မွမ်းမံပါကကျွန်ုပ်သည်ဤအရာကိုဖန်သားပြင်အပြည့်ဖြင့်လုပ်ပါလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့် Quapp ဟုဆိုပါကသင်မည်သို့ပြုလုပ်မည်နည်း။ သင်လိုအပ်သည့် Kingdom Hearts Unchained X (သို့) သင်လိုအပ်သည့်ဂျပန်ဂိမ်းတစ်ခုသို့မဟုတ်သင် BAM လိုအပ်သောဂျပန်မှမည်သည့်ဂိမ်းကိုမဆို download လုပ်၍ ရနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် nte ၏ဆိုလိုရင်းကိုဤနေရာတွင်မပေါ်ပါကဖော်ပြလိမ့်မည်။ သင်၏အတုအယောင် GPS ကိုအလိုအလျောက်ဒေါင်းလုတ်လုပ်ခဲ့ကြောင်းကျွန်ုပ်ဘာကြောင့်အတုပြုလုပ်ခဲ့သည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ၊ ထို့ကြောင့်သင်၏ BlueStacks အရာအတွက်သင်၏ဘရောင်ဇာတွင်သင်၏ဘရောက်ဇာတွင်မရရှိနိုင်ကြောင်းကျွန်ုပ်သိသောကြောင့်၊ XH ရှိဤနေရာတွင် KingdomHearts Unchained ကိုကြည့်ပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတကယ်ပဲတွယ်ကပ်တွယ်တာနေလိမ့်မယ်။ ငါဟာအခုအချိန်မှာစကားမပြောနိုင်သေးဘူးလို့ထင်တယ်၊ ဒါကအမေရိကန်ဗားရှင်းလို့ငါပြောရင်ငါဒီမှာအမေရိကန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိလို့တစ်ခုတည်းသောအကြောင်းပြချက်လား? ငါခွင့်ပြုချက်တစ်ခုကတော့ NA ဗားရှင်းဖြစ်ပြီးအင်္ဂလိပ်စာပါ။ ဒါပေမယ့်ဒီဖန်သားပြင်မှာကျွန်တော်သိတဲ့အကောင်းဆုံး tab တစ်ခုပါ။ ၎င်းသည်လက်ရှိ android platform ပေါ်တွင်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် tab ပေါ်မှာရှိပါတယ်။ ဒီဂိမ်းကဒီဂိမ်းကိုကစားတာမဟုတ်ဘူး၊ ဒီဂိမ်းနဲ့ပတ်သက်တာကငါတကယ်ကစားလို့ရတယ်၊ ဒါကြောင့်ငါတကယ်ကစားလို့ရတယ်။ ဒီဂိမ်းကဂျပန်ဗားရှင်းပါ။ သင်ဂျပန်၌ရှိစဉ်ကအမှန်တကယ်ဂိမ်းကိုကစားရုံသာလျှင်၊ သင်နားလည်နိုင်မှသာလျှင်နားလည်နိုင်မှာမဟုတ်ပါ။ 'အရာရာကိုနားလည်ရန်၊ သင်သည် Twitter အကောင့်တစ်ခုသို့မဟုတ် Tumblr အကောင့်တစ်ခုသို့မဟုတ်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကဲ့သို့သောပြင်ပအရင်းအမြစ်များကိုအသုံးပြုရမည်။ သင့်အတွက်ဘာသာပြန်ဆိုထားသောစကားလုံးများသို့မဟုတ်အဖြစ်အပျက်များရှိနိုင်သည့်စာမျက်နှာနှင့်ဟုတ်ကဲ့၊ ထိုအရာသည်သင်အမှန်တကယ်လိုအပ်သည်။ ဂျပန်အကူအညီများနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲများကိုဒေါင်းလုတ်ဆွဲရန်သင့်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ကစားရန်သင်လိုအပ်သည်။ အကယ်၍ အကူအညီပိုမိုလိုအပ်ပါကအောက်တွင်မှတ်ချက်ပေးပါ။
များသောအားဖြင့်၎င်းသည်ကွန်ပျူတာများနှင့်အက်ပလီကေးရှင်းအများစုအတွက်အလုပ်လုပ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဤအကြောင်းအရာသည်ဂျပန်အကြောင်းကိုသာပြောဆိုလေ့ရှိပြီးတစ်ခါတစ်ရံတွင်ကွန်ပျူတာတွင် areregion lock ဂိမ်းများကိုကစားသည့်အတွက် NA ဗားရှင်းသည်ဒေသဆိုင်ရာသော့ခတ်ခြင်းဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဂျပန်ဗားရှင်းသည်ဒေသဆိုင်ရာသော့ခတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ။ ငါနောက်ဆုံးတော့အဲဒါကိုကစားနိုင်မှာပါ။ ပြproblemနာမရှိပါဘူး။ ဒါကြောင့်ဒီဆောင်းပါးကိုသင်နှစ်သက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်တော့်ကိုအကြံပေးပါ။ လူတိုင်းကိုကူညီပေးနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်၊ ကျွန်တော့်နာမည် Metalcore ပါ။ ငါ Clash Royale ကစားခဲ့တယ်ဆိုတာသိတယ်၊ ငါ Chain X မှာ KingdomHearts တွေအများကြီးကစားတဲ့သူတွေဆီကအေးမြတဲ့ဆောင်းပါးတွေကိုလုပ်ခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကငါကြိုက်တာပေါ်မူတည်တယ်၊ အခုငါ Kingdom Hearts Unchained X ထဲကိုရောက်သွားတယ်။ hisarticlesmine နောက်ပိုင်းတွင်သင်တို့ကိုတွေ့မြင် metalcore ဖြစ်ပါတယ်
tab တွင်, 'Format: ' အတွက်ဆွဲထုတ်မီနူးမှ select လုပ်ပါ။
အကယ်၍ ဤအရာကိုသင်တွေ့လျှင် 'CC' ကိုဖွင့်ထားပြီးဖြစ်သည်။
ယခုသင်ခန်းစာသည်ဂျပန်outsideရိယာပြင်ပ UTAU ကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည်ဆိုသည့်အကြံဥာဏ်အချို့ကိုပြသထားသည်။ သို့သော်မှန်ကန်သောဒေသတွင်းရှိသူများအတွက်ပင်ပြproblemsနာများအတွက်အကြံပြုချက်များလည်းရှိပါသည်။ UTAU ကိုအသုံးပြုရန်သင်သည်ဂျပန် locale ကိုအသုံးပြုသင့်သည်။ (သင်၏သင်နေထိုင်ရာဒေသကိုဂျပန်သို့မည်သို့ပြောင်းရမည်နှင့်ပတ်သက်သောသင်ခန်းစာများစွာကိုကြည့်နိုင်သည်။ ) Japanese locale သို့ပြောင်းလဲခြင်း၏အားသာချက်များ - အားသာချက်တစ်ခုမဟုတ်ပါ၊ သို့သော် Windows သည်၎င်း၏ဘာသာစကားကိုပြောင်းလဲလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ * သင်ပုံမှန်လိုအပ်သည်ဆိုပါကသင်၏ပုံမှန်ဒေသသို့ပြန်သွားနိုင်သည်။ မည်သည့်အသံဘဏ်ကိုမဆိုအသုံးပြုနိုင်သည်။
လူကြိုက်အများဆုံးဂျပန်အသံအုပ်စုသည်သင်ပြောင်းလဲမှုပြုလုပ်မှသာအလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ မှန်ကန်စွာပြသထားသည့်ဂျပန်နှင့်အတူ UTAU အစီအစဉ်။ * VCV အပါအ ၀ င် ust (သို့) vsq အားလုံးနီးပါးကိုသင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Japanese locale သို့ပြောင်းခြင်း၏ဆိုးကျိုးများ - * Windows hard drive တွင်ရှိသည့် language pack ကိုမထည့်သွင်းမီသင်ထည့်သွင်းခြင်းမပြုမှီသင် locale ကို ပြောင်းလဲ၍ မရပါ။ အကယ်၍ သင်သည် hard drive ပျောက်နေလျှင် local ကိုပြောင်း။ မရပါ။ (သို့သော်ထည့်သွင်းပြီးသည့်နောက်တွင် disk ကိုမလိုအပ်တော့ပါ။ ) * သင်စီမံခန့်ခွဲသူအခွင့်အရေးမရသောကြောင့်၊ ဒေသတွင်းကိုသင် ပြောင်းလဲ၍ မရပါ။ UTAU သည် Japan locale ပြင်ပတွင်ပြproblemsနာများရှိသကဲ့သို့သင်၏ပုံမှန် locale ပြင်ပရှိအခြားပရိုဂရမ်များသည်မမှန်မကန်အလုပ်လုပ်နိုင်သည် (လိုအပ်ပါကထိုပရိုဂရမ်များ၏သဘာဝနယ်ပယ်သို့သာပြန်သွားပါ။ ) * GIMP ကဲ့သို့သောအခြားပြင်ပပရိုဂရမ်များသည်၎င်းတို့၏ဘာသာစကားကိုဂျပန်ဘာသာသို့ပြောင်းသည်။ * ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုပြီးတိုင်းကွန်ပျူတာကို restart လုပ်ပါ။ * ကီးဘုတ်တွင်တူညီသောသော့ကိုအသုံးပြုထားပြီး Windows တွင်အရာအားလုံးမှန်ကန်စွာအလုပ်လုပ်သည်ဆိုလျှင်တောင်မှ 'separ' လမ်းကြောင်းလမ်းကြောင်းခွဲခြားခြင်းကိုယန်းအက္ခရာအနေဖြင့်ဖော်ပြလိမ့်မည်။
ဒါဟာဗေဒဆိုင်ရာပြproblemနာတစ်ခုပဲ။ ထို့ကြောင့်ပြောင်းလဲမှုမဖြစ်နိုင်ပါက UTAU ကို Japan ဒေသပြင်ပတွင်သာအသုံးပြုပါ။ (အကယ်၍ သင်ဘာသာစကား pack ကိုပျောက်နေသည်ဆိုပါကသို့မဟုတ် UTAU ထက် ပို၍ အရေးကြီးသောပရိုဂရမ်တစ်ခုအတွက်ကွဲပြားသော locale တစ်ခုလိုအပ်သည်ဆိုပါက) မည်သည့်နည်းဖြင့်မဆိုသင် locale ကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်ဖြစ်စေ၊ မပြောင်းလဲနိုင်သည်၊ ပထမအဆင့်မှာဒသမကိန်းသည်သင်၏ဆက်တင်တွင်ရှိမရှိစစ်ဆေးရန်ဖြစ်သည်။ တစ် ဦး ပွိုင့်ဖြစ်ပါတယ်။
Control Panel ရှိဒေသဆိုင်ရာနှင့်ဘာသာစကားရွေးချယ်စရာများကိုဖွင့်ပါ။ (ဤနေရာတွင် locale ကိုမပြောင်းလဲရသည့်အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤ Windows အကောင့်ရှိဒေသတွင်းပြောင်းလဲမှုကိုပိတ်ထားသည်။ သင်ကြည့်နိုင်သည်။ နံပါတ်ချိန်ညှိချက်များတွင်၊ နံပါတ်များအတွက်ဒdecimalမအမှတ်သည်ကာလတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းစစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည်။
ပိတ် exe 00
ကော်မာ (တောင်အမေရိက၊ Continental Europe) စသည်ဖြင့်၎င်းကိုအချိန်ကာလအဖြစ်သတ်မှတ်ရန်လိုအပ်သည်။ ပconflictိပက္ခကိုရှောင်ရှားရန်ထောင်ကိုတစ်ထောင်ခွဲသောကော်မာအဖြစ်လည်းပြုလုပ်ပါ။ ) အချက်တစ်ခုအနေဖြင့်ဒdecimalမအမှတ်သည်မည်သည့် .exe resampler (UTAU အသုံးပြုသောအထူးဖိုင်) ကိုသုံးရန်ခွင့်ပြုသည်။
သို့သော်သင်အကြောင်းပြချက်အချို့ကြောင့်သင်ဤပြောင်းလဲမှုကိုမပြုလုပ်နိုင်ပါက 'အမှား' resampler.dll ကိုသင်အသုံးပြုနိုင်ဆဲဖြစ်သည်။ resampler.dll အကြောင်းယခုသင်ခန်းစာအဆုံးတွင်ရှင်းပြပါမည်။
ကော်မာ / အမှတ်ပြproblemနာကိုသင်ဖြေရှင်းပြီးပါကလိုအပ်ပါကအလုပ်လုပ်သော UTAU ပရိုဂရမ်လိုအပ်လိမ့်မည်။ တရားဝင် download တည်နေရာကို http: //utau2008.xrea မှဖြစ်သည်။
jp / ပုံမှန်တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်သယ်ဆောင်ရလွယ်သော zip ဗားရှင်းတစ်ခုရှိသည်။ zip version သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ 'gaijin' (ဆိုလိုသည်မှာ) အတွက်လုံလောက်သည်
ဂျပန်မဟုတ်) ဒေသ။ သို့သော်တပ်ဆင်သည့်ဗားရှင်းကိုအသုံးပြုခြင်းသည်သင်၏ကွန်ပျူတာသို့အသုံးဝင်သောဖိုင်အချို့ကိုထည့်ခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်သည် zip ဗားရှင်းကိုသာအသုံးပြုနေလျှင်ပင်၎င်းကိုတပ်ဆင်သင့်သည်။
ငါ zip ဗားရှင်းကိုသာမည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုပြပါလိမ့်မယ်။ သင်၏အက်ပလီကေးရှင်းကို အသုံးပြု၍ မရပါ၊ သင်၏အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအခွင့်အရေးနိမ့်သောကြောင့် (သို့) အိတ်ဆောင် drive နှင့်ကွဲပြားသောကွန်ပျူတာများတွင် UTAU ကိုအသုံးပြုလိုသောအချိန်များရှိနိုင်ပါသည်။ ဂျပန်ဘာသာစကားတွင် UTAU ကိုသင်သုံးလိုပါကဘာသာပြန်ချက်ပြင်ဆင်လိုသည်။
UTAU Wiki English၊ mianaitos English သို့မဟုတ် Kaotiks Spanish ကဲ့သို့အချို့ရှိပါသည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ, ငါ mianaitos အင်္ဂလိပ်ကိုအသုံးပြုလို။ http://www.voiceblog.jp/mianaito/ သို့သွားပါ။ ထိုနေရာတွင် 'UTAU x.x.xx (ကျွန်ုပ်တို့နောက်ဆုံးပုံစံကိုလိုချင်သည်) English Resource' အတွက် link တစ်ခုတွေ့လိမ့်မည်။
လင့်ခ်များကို လိုက်၍ ဆောင်းပါး၌ကဲ့သို့ zip ဖိုင်ကိုရယူပါ။ ယခုသင်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်မှာ UTAU.exe ရှိသည့် zip ဖိုင်ရှိ 'res' ဖိုင်တွဲကိုထည့်ရန်ဖြစ်သည်။
တပ်ဆင်။ ရသောဗားရှင်းကိုမသုံးရန်သင်ဆုံးဖြတ်ပါက UTAU မှရှာမတွေ့နိုင်သောဖိုင်များအကြောင်းမေးမြန်းရန်ငြင်းဆန်နိုင်သည်။ ဂူဂဲလ်ကိုသာတောင်းပါ (များသောအားဖြင့် 'COMDLG32.OCX' နှင့် / သို့မဟုတ် 'MSCOMCTL.OCX') တောင်းသောဖိုင်များကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါ။ UTAU.exe အနီးတွင် 'res' ဖိုင်တွဲကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့ထည့်ပါ။ ကျွန်ုပ်ဤဖိုင်များကိုဤနေရာတွင်မလိုပါ သူတို့သည်ကျွန်ုပ်၏ ၀ င်းဒိုးတွင်ရှိနေပြီး ဖြစ်၍ သူတို့ကိုကျွန်ုပ်ဖျက်ပစ်မည်။
ဒါကြောင့် UTAU.exe ကိုတစ်ကြိမ် run ပါ။ ဒီပရိုဂရမ်က Uta Utane (defoko လို့လည်းခေါ်ပါတယ်) ကိုဖန်တီးပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျ 'gaijin' mode မှာရှိလျှင်သာနောက်အပိုင်းတစ်ပိုင်းလိုအပ်သည်။
စကားမစပ်ညာဘက်အောက်ခြေမှာ M တစ်ခုရှိမရှိသေချာအောင်လုပ်ပါ။ UTAU ကိုပိတ်ပါ။ ယခုအခါဂျပန် locale ကိုအသုံးမပြုရန်ပြtheနာများစတင်နေပြီ။
Uta Utane ကသူမရဲ့အသံစာရင်းထဲကနမူနာတွေရခဲ့ရင်တောင်မသီချင်းနိုင်ဘူး။ မင်းရဲ့ voicebank ကိုကြည့်ရအောင်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဂျပန်ဘာသာစကားပြင်ပတွင်ရှိနေသောကြောင့်ဟီရာဂါနာ (ဂျပန်စာလုံးများ) ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ဖော်ပြမည့်အစားမိုဂျီဘိတ် (ထိုအပင်များ) ။
ထိုကဲ့သို့သောပြofနာမျိုးသည် 'gaijin' ဒေသအတွက်အလွန်ပြproblemနာဖြစ်နေသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ဘဏ် voicebank ကိုရှင်းရန်လိုအပ်သည်။ ဤဒေသရှိဤ defoko ကိုကျွန်ုပ်တို့မသုံးနိုင်ပါ။ Romaji (လက်တင်အက္ခရာများ) ဖြင့် encoded voicebank လိုအပ်သည်။
အသံဖိုင်များကို UTAU ဝီကီ (http://utau.wikia.com/wiki/UTAU_wiki) တွင်ရှာပါသို့မဟုတ် voicebanks စာရင်းတွင် http://ruto.yu.to/ သို့မဟုတ်သင်အကြိုက်ဆုံးဝက်ဘ်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင် romaji voicebank Celestine Aoi ကိုသုံးပါ ( celTOILE) http://celestineaoi.blogspot.com/ မှ .rar ကိုကျွန်တော် compressed လုပ်ပြီး၎င်း၏ folder ကို UTAU ၏ voice folder ထဲသို့ကူးယူပြီးဖြစ်သည်။
နောက်တဖန် Character.txt ကိုကြည့်ပါ။ 'name =' လိုင်းကိုစစ်ဆေးပြီး၎င်းတွင် mojibake တစ်ခုတည်းသာမက Romaji အမည်ပါရှိကြောင်းသေချာပါစေ။
ဒီမှာနာမည်ကမှန်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါကပြောင်းလိုက်မယ်။ နောက်မှဘယ်မှာပေါ်လာလဲ၊ ဘာဖြစ်လို့လက်တင်အက္ခရာနဲ့ရိုက်ရမယ်ဆိုတာကိုသိနိုင်တယ်။ ယခုလက်ရှိ voicebank ဖြင့် UTAU ကိုပုံမှန်ဖွင့်နိုင်သည်။ (ဒီသဲလွန်စကိုလျစ်လျူရှုပါ။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ sample.wav မှာ frq (သို့) ဒီလိုမျိုးဘာမှမရှိဘူး။ ) 'name =' ဆိုတဲ့လိုင်းကိုဒီမှာတွေ့နိုင်တယ်။
ဒါဟာ mojibake ဖြစ်တယ်ဆိုရင်၊ ဒါကစာဖတ်ရခက်တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ romaji encoded voicebank ကို 'set as' အဖြစ်မှတ်ရန်အဆင်ပြေသည်။ (Project Properties-> Voicebank ကိုရွေးပါ။
၎င်းကို Default အဖြစ်ထားပါ။ ) ဒီ Voicebank ကိုအနည်းငယ်သီဆိုကြပါစို့။ ကျွန်ုပ်သည် romaji တွင် ust (သီချင်းပါသောဖိုင်) ကိုအသုံးပြုနေသည်ကိုသင်တွေ့နိုင်ပါသည်။
'gaijin' ဖြင့် UTAU သည်ဂျပန်အက္ခရာများကိုလုံးလုံးအသုံးမပြုပါ။ အားလုံးရွေးပြီးကစားကြပါစို့။ တကယ်တော့သင်ဒီမှာ“ ust ကို voicebank နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်” လုပ်ရမယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒီ ust ကအဲဒါကိုကယ်တင်ပြီးပြီ။
resampler.dll အတွက်ယခု ဒtheမအမှတ်ကိုအမှတ်အဖြစ် သတ်မှတ်၍ မရပါကဤနေရာတွင် DLL ကိုထည့်ရမည်။
ဒdecimalမအမှတ်အတွက်ကော်မာကို reset လုပ်တယ်။ သငျသညျပုံမှန် resampler.exe ဤနေရာတွင်ပျက်ကွက်တွေ့နိုင်ပါသည်။
သင်အသုံးပြုရန်လိုအပ်ကောင်းအခြားအခြေအနေတစ်ခုမှာ admin သည် cmd ကိုပိတ်ထားလျှင် (အနက်ရောင် rendering ၀ င်းဒိုးသည်အသုံးပြုနေသည်) ဖြစ်သည်။ resampler.dll ကိုသတ်မှတ်ရန်ဤစီမံကိန်း box ကို check properties ကိုသာစစ်ဆေးရန်ငါ cache ကိုဖျက်ရန်မေ့ခဲ့သည်။
resamplers ပြောင်းလဲသည့်အခါ Clear cache ကိုလိုအပ်သည်။ ပထမ ဦး စွာကျွန်ုပ်တို့သည်သီချင်း၏ tempo သည်မမှန်ကန်ကြောင်းသိရန်လိုအပ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် UTAU သည်ဒသမကိန်းကိုကော်မာတစ်ခုအနေဖြင့်အဆ ၁၀၀ မြှောက်ပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ တန်ဖိုး ၁၀၀ ကိုသာအသုံးပြုပါ။
ထိုကာလကိုဒdecimalမအမှတ်အဖြစ်သုံးပါ။ အကယ်၍ tempo ပုံမှန်အားဖြင့် ၁၄၀ ဖြစ်ပါကကျွန်ုပ်တို့သည် ၁.၄၀ ကိုသုံးမည်။
resampler.dll သည်လည်းမှားယွင်းနေသည်။ ရှားရှားပါးပါးကိစ္စများတွင်ပေါက်ကွဲသောမှတ်စုတစ်ခုဖြစ်ပေါ်နိုင်သည် (အလွန်ကျယ်လောင်ပြီးကျိုးပဲ့နိုင်သည်) ။
ကျိုးပဲ့သောမှတ်စုကိုရွေးပါ၊ ၎င်းကိုညာဖက် နှိပ်၍ ၎င်း၏ cache ကိုရှင်းလင်းပါ။ အဲဒါကိုပြန်ဖွင့်ပြီးကြည့်လိုက်တာလားကြည့်ပါ ဦး ။ အကယ်၍ မပြပါက၎င်းကိုထပ်မံ ဖျက်၍ အလုပ်မလုပ်မှီကစားပါ။
Locale emulator ကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲ။
အထက်ပါမည်သည့် link မှမဆို executable ကို download လုပ်ပါ။
ဖိုင်များအားလုံးကို SAFE ဖိုင်တွဲတစ်ခုထဲသို့ထုတ်ယူပါ (အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သင်တပ်ဆင်ပြီးနောက်ဤဖိုင်များကိုသင်ရွှေ့ပြောင်းနိုင်မည်မဟုတ်သောကြောင့်)
LEInstaller.exe ကိုဖွင့ ်၍ _ 'Install / Upgrade ' ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
ယခုမြင်လိမ့်မည်။ဒေသတွင်း Emulatorဖိုင်များပေါ်တွင် right-click သောအခါအဆက်စပ်မီနူးအတွက် 'menu ကို။
20 ဇွန်။ 2019
DAVID EAST: Firebase ၏အခြေခံသဘောတရားတစ်ခုမှာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုလွယ်ကူစေရန်ဖြစ်သည်။
ဒါကြောင့်မနှစ်ကကျွန်တော်တို့ Firebase EmulatorSuite ကိုထုတ်ဝေခဲ့တယ်။ Emulator Suite သည် command line tool တစ်ခုဖြစ်ပြီးသင့်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် Cloud Firestore၊ Cloud Functions၊ Cloud Pub / Sub နှင့် Cloud ၏အချိန်နှင့်တပြေးညီဒေတာဘေ့စ်ကိုသုံးနိုင်စေသည်။ ပြီးတော့ဒါကသင့် app ကိုရှေ့ပြေးပုံစံထုတ်ခြင်း၊ စမ်းသပ်ခြင်းများနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်ပေါင်းစည်းခြင်းတို့ကိုပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။
ဒါပေမယ့်ခင်ဗျားဆီကနေကြားဖူးတာကမင်းက command line tool ထက်ပိုလိုချင်တယ်၊ ခင်ဗျားဟာအမြင်တွေ tools တွေကိုလိုချင်တယ်၊ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည်သင်၏ Cloud Functions မှတ်တမ်းများကိုကြည့်ရှုခြင်း၊ ဒေသတွင်းဒေတာများကိုအမြောက်အများတင်သွင်းခြင်းနှင့်သင်၏အချက်အလက်တည်ဆောက်ပုံများကိုစမ်းသပ်ရန်အမြင်အာရုံဆိုင်ရာကိရိယာများကိုသုံးနိုင်သည်။ ဤတွင် Firebase တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအမြင်အာရုံကိုဖန်တီးရန်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။
ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က local Fireb emulator UI ကိုကျွန်ုပ်တို့ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော့်နာမည် David East ငါက Firebase မှာ developer တစ်ယောက်ပါ။
ငါ 15 မိနစ်အတွင်းမှာပဲ emulator UI ကိုဘယ်လိုစတင်ရမယ်ဆိုတာသင်ပေးလိမ့်မယ်။ ကျွမ်းကျင်သူတစ် ဦး ထံမှအကူအညီ။ Tyler Crow: လူတိုင်းကိုဟေ့။
ကျွန်တော့်နာမည် Tyler Crowe ပါ။ ငါ emulator suite ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းမန်နေဂျာပါ။ ငါဒါရိုက်တာ၏မေးခွန်းများကိုအချိန်နှင့်အမျှခဏရပ်ပြီးကျွန်တော် emulator Suite UI ကိုဖြတ်သန်းသွားသောအခါအကြံဥာဏ်များနှင့်လှည့်ကွက်အချို့ပေးပါလိမ့်မည်။ David East: ဒီအကူအညီကိုငါလိုအပ်လိမ့်မည်။
သို့သော်ဤဆောင်းပါး၏ရည်မှန်းချက်မှာ emulator UI မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုပြရုံသာမကသင့်အား local Fire-based first development သို့ပြောင်းရန်ဖြစ်သည်။ emulator UI ကိုယ်တိုင်သည် local web app ဖြစ်သော်လည်း Terminal တွင်ကျွန်ုပ်တို့လွှတ်တင်သည်။ Firebase CLI နှင့်အတူ။ သငျသညျဗားရှင်း 8.4 သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသောအဆင့်မြှင့်တင်ထားကြောင်းသေချာအောင်ပြုလုပ်ပါ။ သို့သော်အချို့သောအင်္ဂါရပ်အသစ်များထွက်ပေါ်လာပြီဖြစ်သောကြောင့်နောက်ဆုံးဗားရှင်းကိုအသုံးပြုရန်ကျွန်ုပ်အကြံပြုလိုပါသည်။ Firebase နှင့်အတူအချည်းနှီးဖြစ်သော Firebase စီမံကိန်းကိုစတင်ခြင်းဖြင့်စတင်ပါ။
ထို့နောက်ငါလိုအပ်သောကုန်ပစ္စည်းများကိုရွေးချယ်ပြီးသရုပ်ပြသဖြင့်အရာအားလုံးကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏စီမံကိန်း ID နှင့်အခြားအရေးကြီးသောသတင်းအချက်အလက်များကိုမည်သည့် emulators များမှတ်တမ်းတင်ရန်ငါလိုချင်သည်ကိုအစပြုချင်သည်ဆိုသည့်နေရာသို့ရောက်ရန်ငါထည့်လိုက်သည်။ ဒီနေရာတွင် emulator တစ်ခုချင်းစီနှင့် user interface တစ်ခုစီကို run ချင်သော ports များကိုသင်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ default settings အားလုံးကောင်းပါတယ်။
ယခုတွင်ငါသည် Firebase မှ emulator ကိုစတင်ရန်နှင့် emulators ကိုစတင်ရန်လိုအပ်သည်။ ဒီဟာကဘယ် port မှာဘယ် emulators တွေ run နေတယ်ဆိုတာကိုပြပေးတဲ့ screen ကိုပေးတယ်။ emulator UI port ကိုပုံမှန်အားဖြင့် 4,000 မှာစတင်သည်။
ဒီဟာကိုဖွင့်ကြည့်ရအောင် emulator သည်သင်၏ local running service များအားလုံးကိုခြုံငုံသုံးသပ်ပြီးစတင်သည်။ ၎င်းသည် Firebase console နှင့်အနည်းငယ်ကွာခြားကြောင်းသင်သတိပြုမိလိမ့်မည်။
ခရမ်းရောင်ပဲ ငါတို့သည်အဘယ်ကြောင့်ဤသို့ပြုခဲ့တာလဲ တကယ်တော့ငါတို့ဘာလို့ဒီကိုလုပ်ခဲ့တာလဲ။ ဟေး၊ Tyler.TYLER Crow: EmulatorUI သည်ထုတ်လုပ်မှု UI နှင့်ကွဲပြားကြောင်းအထူးသဖြင့်ရှင်းလင်းလိုသည်။
ဤအတက်ရောစပ်အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါသည်။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က Firebase palette ကိုအရောင်အသစ်တစ်ခုကိုမိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ သင်သွားသည့်အခါခရမ်းရောင်သည်ခလုတ်များ၊ ရွေးချယ်မှုအခြေအနေနှင့်မောက်စ်အခြေအနေတွင်ပေါ်လာသည်ကိုသင်သတိပြုမိလိမ့်မည်။
သငျသညျဂရုတစိုက်ကြည့်ရှုလျှင်, ငါတို့ကုမ္ပဏီအသစ်ဖြစ်ကြောင်းကိုတွေ့လိမ့်မည်။ ၎င်းတွင်ခရမ်းရောင်အရသာရှိသော Firebase အတွက် Vicon ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ အကယ်၍ သင်သည် Firebase console ကိုရယူရန်လိုအပ်ပါကခြုံငုံသုံးသပ်ချက်စာမျက်နှာရှိ link တစ်ခုမှသင်ရရှိနိုင်သည်။
DAVID EAST: အခုဒီအမှုကိုလုပ်ကြည့်ရအောင်။ ငါ Realtime ဒေတာဘေ့စမှစတင်ပါလိမ့်မယ်။ ပထမ ဦး စွာ Realtime DatabaseViewer ကိုလုံးဝပြန်လည်ဒီဇိုင်းထုတ်ခဲ့သည်ကိုငါပြောချင်ပါတယ်။
၎င်းသည်ယခုအကျွမ်းတဝင်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မည်၊ သို့သော်တည်းဖြတ်ခြင်းထိန်းချုပ်မှုများသည် ပို၍ ရှုပ်ထွေးသည်။ node အသစ်များကိုထည့်ခြင်းကသင့်အား Firestore နှင့်ဆင်တူသည့် inline editor တစ်ခုပေးသည်။ DefaultB အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကလေးများ node များကိုသော့များအတွက် push IDs များဖြင့်ထည့်ထားသည်။
ထို့အပြင်အချက်အလက်စုစုပေါင်းတစ်ခုအနေဖြင့်လည်းရွေးနိုင်သည်။ B. Array များသာမကအခြေခံအားဖြင့်အရာဝတ္ထုဖြစ်သောမြေပုံလည်းဖြစ်သည်။ ယခုလျင်မြန်စွာဒေတာကိုင်တွယ်မှုအတွက်အလွန်ကောင်းပါတယ်။
ဒါပေမယ့်ဘာလဲ။ အက်ပလီကေးရှင်းများထုတ်လုပ်သည့်အခါကျွန်ုပ်သည်အချက်အလက်အမြောက်အများတင်သွင်းရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်ဖိုင်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ခြင်းသို့မဟုတ်၎င်းကို Viewport ထဲဆွဲချခြင်းအားဖြင့်သင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဒါကြောင့်ငါတို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်တစ်ခုလုံးဒေတာအစုရှိသည်။
ဒီစမ်းသပ်မှုအချက်အလက်တွေကို emulator မှာတွေ့ရတာတကယ်ကိုဝမ်းသာနေပေမဲ့၊ အဲဒါကို app တစ်ခုနဲ့တကယ်ဆက်သွယ်ချင်တယ်။ ဒီတော့ကျွန်တော့် code editor ထဲကိုဝင်ခွင့်ပြုပါ။ ဒီမှာငါတည်းဖြတ်သူတွင်ကုဒ်အချို့ရှိပြီး၎င်းသည် real-time database နှင့်ဆက်သွယ်သော task app တစ်ခုအနေဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။
ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာဥပမာအားပြောရန်ဤဖွဲ့စည်းပုံကိုကျွန်တော် if statement ကိုရေးပါမယ်။ ထိုနေရာသည် hostname သည် host နှင့်တန်းတူဟုတ်မဟုတ်ကိုကျွန်ုပ်စစ်ဆေးလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်သည် local ဖြစ်ကြောင်းကိုသိသည်နှင့် local host 9000 ဖြစ်သော databaseURL ကိုပြန်ပို့ပေးသော configuration ကိုသုံးလိမ့်မည်၊ ကျွန်ုပ်ဖွင့်လိုက်သော port နှင့် query string တစ်ခုဖြစ်သည်။ ns သည်ကျွန်ုပ်၏စီမံကိန်းအိုင်ဒီ emulator UI နှင့်ကိုက်ညီပြီး ns သည် namespace ဖြစ်သည်။ ဒါ့အပြင် local emulator မှာချိတ်ထားတာကြောင့်ဒီ configuration အပြင်တခြား code ပြောင်းလဲစရာမလိုပါဘူး။
ဒါကြောင့်ငါ့ app ကိုငါဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအရာဝတ္ထုတွေဟာအတူတူပဲအလုပ်လုပ်ကြတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းတို့အားပြီးပြည့်စုံသည်ဖြစ်စေ၊ မပြည့်စုံသည်ဖြစ်စေ၊ ၎င်းတို့သည်ယနေ့သို့မဟုတ်ယခုသီတင်းပတ်တွင်ဖြစ်မည်လား၊ သို့မဟုတ်အလုပ်အမျိုးအစား၊ ကြံ့ခိုင်မှု၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ၊ ဒါကြောင့်၊ real-time database နဲ့ task node ပေါ်မှာငါရှင်းရှင်းလင်းလင်းမေးမြန်းနေတယ်ဆိုတာငါသိတယ်။
ငါမေးခွန်းများကိုမျိုးစုံလုပ်လိမ့်မယ်ဘယ်လိုမသေချာဘူး။ Tyler? TYLER CROWE - စုံစမ်းမှုတစ်ခုအပေါ်မှီခိုမည့်အစားပြီးပြည့်စုံသောအလုပ်များနှင့် node များကိုဒေတာဘေ့စ်တွင်သိမ်းဆည်းနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးလုံးလျားလျားစုံစမ်းမှုတစ်ခုပေးပြီးပြီးပါကပြီးစီးသည့်အလုပ်များအတွင်းတွင်စုံစမ်းမှုများပြုလုပ်နိုင်သည်။
ဤသည် denormalization ၏ဂန္ဥပမာဖြစ်ပါတယ်။ DAVID EAST: ကောင်းပြီ။ user interface တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ database ဖွဲ့စည်းပုံကိုပြန်လည်ဒီဇိုင်းကြစို့။
Real-time database Viewer တွင် filter တစ်ခုပါ ၀ င်ပြီးနောက်ကွယ်ရှိစုံစမ်းမှုများကိုပြုလုပ်ပေးသည်။ မှတ်တမ်းတင်ထားသည့်အချက်အလက်များကိုလည်းစစ်ထုတ်သည်။ အဆင့်တစ်ခုချင်းစီတွင်သင်၏ RTDB အချက်အလက်အတွက်ဇယားမြင်ကွင်းကိုပင် enable လုပ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ထိုအချက်အလက်များကိုစစ်ထုတ်သည်။ ကျွန်ုပ်လိုချင်သော်လည်းကူးယူနိုင်သည် ၎င်းကို database ၏တည်နေရာအသစ်သို့ Clone function အသစ်နှင့်လုပ်နိုင်သည်။ Clone function သည်ထိုတည်နေရာရှိဒေတာအားလုံးကိုယူပြီး filter တစ်ခုအားအသုံးပြုပြီးပါကသင့်အားရွေးစရာရှိသည်။ ငါယခုစမ်းသပ်ချင်သောအတိအကျဖြစ်သော filtered Datasets ပုံတူပွား, ယခုကျွန်ုပ်သည်ဤတာ ၀ န်များအားလုံးကိုအဆင့်အတန်းအားဖြင့်ဖြိုဖျက်ပြီးပြီ။ သို့သော်အမျိုးအစားကော။ ငါလည်းထပ်တူလုပ်နိူင်တယ်။ အဲဒါကအနည်းငယ်ရှုပ်ထွေးတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါဟာအဆုံးမဲ့အရေအတွက်ရှိလို့လေ။ ဒါကြောင့်သူတို့ကိုငါလက်နဲ့ပဲပွားလို့မရဘူး။ Tyler? Tyler Crow: အခုတကယ်အစွမ်းထက်တဲ့အရာတစ်ခုအတွက်။
လုပ်ငန်းတစ်ခုစီကိုအမျိုးအစားအလိုက်သိမ်းဆည်းရန်ပုံမှန်ဖြစ်ခြင်းကိုငါပုံမှန်ဖယ်ထားပါလိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်ငါဒေတာဘေ့စဥပမာထဲမှာကြာသော de-normalize ဟုခေါ်သည့်နည်းလမ်းတစ်ခုဖန်တီးပါလိမ့်မယ်။ ဒီမှာက async နဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့စောင့်နေတဲ့အရာအားလုံးကိုဖတ်မယ်။
အလုပ်တိုင်းကသူပိုင်တဲ့အမျိုးအစားတိုင်းအောက်မှာသေချာအောင်လုပ်ချင်တယ်။ အဲဒီလိုလုပ်ဖို့၊ ငါလျှပ်တစ်ပြက်ရိုက်ချက်တခုချင်းစီကိုဖြတ်ပြီးအပိုင်းကိုယူမယ်၊ ပြီးတော့ကြီးမားတဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုဖန်တီးမယ်။ ဤအရာဝတ္ထုသည်အမျိုးအစားတစ်ခုချင်းစီကိုသော့တစ်ခုအဖြစ်သိုလှောင်သည်။
ပြီးတော့အဲဒီအမျိုးအစားသော့တွေရဲ့တစ်ခုစီမှာ၊ ကျွန်တော်တို့ဟာအမှန်တကယ်လုပ်ငန်းတာဝန်ကိုသိမ်းဆည်းလိုက်တယ်။ ပြီးသွားရင်ဒေတာဘေ့စ်ရဲ့ root directory ထဲမှာတစ်ခုလုံးသိမ်းဆည်းထားနိုင်တယ်။ ဒီလိုပါပဲ၊ snippet ကို run လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဟာ data တွေအားလုံးကိုမှန်ကန်သောနေရာများသို့ denormalized ဖြစ်သွားသည်။
သင့်ရဲ့ကုန်ထုတ်စွမ်းအားတိုးမြှင့်ဖို့ emulator အသုံးပြုသူ interface ကိုသင်အမြင်အာရုံ tools များများစွာပေးသည်။ သို့သော်သင်ပိုမိုရှုပ်ထွေးသည့်အရာတစ်ခုကိုလုပ်ရန် DevTools သို့အမြဲသွားနိုင်သည်။ Real-time database ကိုဖုံးအုပ်ထားသောကြောင့် firestore နှင့် functions များဖြင့်စတင်နိုင်ပါသည်။
Firestore Data Viewer သည်ကြာရှည်စွာအသုံးပြုခဲ့သော Firestore အသုံးပြုသူများအားလုံးအတွက်အလွန်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်လိမ့်မည်။ သင် console လုပ်ချင်သောအရာအားလုံးကိုလုပ်နိုင်သည်။ ဥပမာ - စာရွက်စာတမ်းများသည်သင်စစ်ထုတ်လိုသောနယ်ပယ်၊ အခြေအနေ၊ တန်ဖိုး၊ တန်ဖိုးမြင့်တက်ခြင်းစသည်တို့ကိုရှာဖွေနိုင်သည်သို့မဟုတ်ပင်စစ်ထုတ်နိုင်သည်။ ထိုအစဉ်အလာအတိုင်း, ကျနော်တို့က code ကိုအတွက်ထိုမေးမြန်းမှုကိုကြည့်သောအရာကိုသင်တို့ကိုပြပါလိမ့်မယ်။
ထိုသူတို့ကိုသင်ကျင့်သုံးပါကဤသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသောလမ်းလျှောက်မှုကိုသင်တွေ့နိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်ငါတို့ထပ်ဖြည့်စွက်ထားတာတစ်ခုကတော့သင်၏အချက်အလက်အားလုံးကိုသင်မကြောက်သင့်သောခလုတ်တစ်ခုတည်းဖြင့်ဖျက်ပစ်နိုင်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ငါတို့နေတုန်းကအချက်အလက်တွေထဲသွင်းသွင်းဖို့ UI tools တွေမရှိရင် Firestore, သင်သည် CLI ကိုသုံးနိုင်သည်။ command line တွင်, သင်သည်လက်ရှိ data တွေကို running emulator တွင်တင်ပို့နိုင်သည်။
သင်သည်၎င်းကို Firebase Emulators Export command ဖြင့် လုပ်၍ ပို့ရန်လမ်းကြောင်းကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ဒါကြောင့်သင်ကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမျိုးစေ့လို့ခေါ်တယ်၊ Seed name လို့ခေါ်မယ်။
အကယ်၍ သင့်တွင်ရှိပြီးသားဒေတာများရှိပါက၎င်းကို ထပ်၍ ရေးကူးရန်အဆင်သင့်ဖြစ်မလားမေးလိမ့်မည်။ ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်အမြင်တွင်အဆင်ပြေသည်။ ငါ၏တင်ပို့မှုပြီးပြည့်စုံပြီ၊ သင်သည် emulator UI ကိုပြန်ဖွင့်သောအခါ၎င်းကိုသုံးပါ။ ထိုအခါငါပြန်ဖွင့်ရန် Firebase emulator ၏ startup command ကိုသုံးပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်ဒီတစ်ခါတော့ဒီတင်ပို့မှုအလံကိုငါသုံးပါလိမ့်မယ်။
ထိုအခါငါငါတို့အမျိုးအနွယ်ကိုခေါ်တော်မူသောငါ့လမ်းကြောင်းကိုသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ ငါတို့သည်နောက်တဖန်သွားကြကုန်အံ့။ အချို့သောအကြောင်းပြချက်များအရဤအချိန်သည်ကျွန်ုပ်၏ဖွံ့ဖြိုးရေးစက်၌ကျွန်ုပ်လုပ်နေသောအရူးအမူးများကြောင့် ၄၀၀၀ ကို စတင်၍ မရပါ။
ဒါပေမယ့် CLI ကလာမယ့် port မှာ 4001 ဖြစ်လိမ့်မယ်။ ငါ့ကို emulator UI မှာတင်ပို့လိုက်တဲ့ data တွေအားလုံးရှိတယ်။ ဆိုလိုတာကတော့အဲဒါကိုအချိန်မရွေးဖျက်ပစ်မှာကိုငါစိုးရိမ်စရာမလိုတော့ဘူး။ Firestore အသုံးပြုသူမျက်နှာပြင်သည်တော်တော်လေးအဆင့်မြင့်ပြီးဖြစ်သောကြောင့်ပြသရန်မလွယ်ကူပါ။
အခုငါတကယ်လုပ်ချင်တာကတော့ Cloud Functions နဲ့ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲဆိုတာကိုပြပေးပါ။ ဤ Firestore Viewer ရှိအချက်အလက်သည်သစ်ထုတ်လုပ်ရေးအတွက်လမ်းလျှောက်ရန်အသုံးချပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်လမ်းလျှောက်တိုင်းမင်းက entry တစ်ခုကို log လုပ်တယ်။
ကျွန်ုပ်၏တည်နေရာမှရာသီဥတုကိုအလိုအလျောက်မှတ်တမ်းတင်ရန်ခွင့်ပြုသည့်အင်္ဂါရပ်တစ်ခုထပ်ထည့်ချင်သည်။ ဒါဆို Cloud Functions ကိုရေးကြရအောင်။ ကျနော်တို့ကတောင်တက်၏တည်နေရာမှာ On Createtrigger ကနေအစပျိုး။
စာရွက်စာတမ်းတခုကိုဖန်တီးတဲ့အခါမှာငါရာသီဥတုအခြေအနေ API ကိုတောင်းပြီးတော့စာရွက်စာတမ်းတွေကို update လုပ်တယ်။ ဤအရာအားလုံးကိုဒေသအလိုက်လုပ်ဆောင်ပြီးပြီ။ သင် Cloud Functions များကိုရေးသောအခါအရာရာတိုင်းသည်အမှန်တကယ်မြန်ဆန်စေရန်ဖွံ့ဖြိုးဆဲနေစဉ်သင်၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုဒေသန္တရလှောင်ပြောင်ရန်ကြိုးစားသည်။ ယခုကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။ တကယ့်ရာသီဥတု API ကိုသုံးမယ့်အစား၊ ငါဟာ Cloud function တစ်ခုနဲ့လှောင်ပြောင်မှာပါ။
ငါအရမ်းသဘောတူတယ်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ ဦး စားပေးမှုဖြစ်သော်လည်းသင်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အကိုက်ညီဆုံးဖြစ်ပါကကွန်ရက်မှတစ်ဆင့်အခမဲ့ဆက်သွယ်ပါ။ ဒါကြောင့်ဒီလှောင်ပြောင်တာဟာကိုယ်ခန္ဓာထဲကနေရာကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပြီးရာသီဥတုအခြေအနေအတုနည်းနည်းလေးထဲထည့်ပြီးပြန်ကောင်းလာမယ်။ ခက်ခဲတဲ့ရာသီဥတုဖြစ်လိမ့်မယ်။
ငါမတော်တဆတစ်ခုခုလုပ်နိုင်တယ်, ဒါပေမယ့်အခုအချိန်မှာရာသီဥတုအခြေအနေပဲရှိတာကြောင့် endpoint ကိုအဆက်မပြတ်သိမ်းဆည်းလိုက်တယ်၊ အခု Update Weathertrigger ထဲမှာအသစ်စက်စက်ဖန်တီးထားတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေရဲ့တည်နေရာကိုရပြီ၊ အဲဒါကိုကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်အဖြစ်သုံးနိုင်တယ်။ တောင်းခံရယူသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖန်တီးလိုက်သော Cloud Functions function ။ ရာသီဥတုအချက်အလက်များကိုတုန့်ပြန်မှုတစ်ခုအနေဖြင့်ပြန်လည်ရယူပါက JSON အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်စာရွက်စာတမ်းကိုမိုးလေဝသအချက်အလက်နှင့်ပြန်လည်အပ်နှံနိုင်သည်။ ကျွန်တော် asynchronous စောင့်ဆိုင်းနေတဲ့အတွက်ဒီနည်းလမ်းကို asynchronous အဖြစ်မှတ်သားထားဖို့လိုတယ်။
эмуляသူသည်ကုဒ်ပြောင်းလဲမှုကိုချက်ချင်းကောက်ယူခဲ့ပြီးစမ်းသပ်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။ ဒီတော့လမ်းလျှောက်မှုအသစ်လုပ်ကြရအောင်။ ဒါပေမယ့်ဘာမှမဖြစ်လာပါဘူး
ဟေး tyler TYLER CROWE - ပရိုတိုကောများကဏ္tabတွင်၊ emulators အားလုံးမှပရိုတိုကောအားလုံးကိုတွေ့နိုင်သည်။ fuzzy search ကို အသုံးပြု၍ function name ကိုရှာဖွေပါကထို function ခလုတ်အတွက်မှတ်တမ်းများအားလုံးကိုရှာနိုင်သည်။
ယခုတွင်ဤနေရာတွင်သင်အကြွင်းမဲ့ url အစားအမှားတစ်ခုလုပ်မိသည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီ။ ဒီမှာမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြောင်းလဲပြီးအမြန်စမ်းသပ်မယ်ဆိုရင်ငါတို့သွားမှာမဟုတ်ဘူး။ ယခုငါတို့အောင်မြင်သောခလုတ်ရှိသည်။
DAVID EAST: အိုကေပါတယ်၊ ဒါကငါတို့ pub / sub emulator ကိုတောင်မရသေးဘူး၊ အကယ်လို့မင်းကဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်၊ မှတ်ချက်တစ်ခုချန်ထားဖို့သေချာတယ်၊ သင်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုဘယ်လိုမြင်မလဲ။ လုံခြုံရေးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို emulator ဖြင့်စစ်ဆေးရန် Todd Kerpelman နှင့် Rachel Mey တို့ကိုစစ်ဆေးပါ။ ဤ ၁၅ မိနစ်တွင်သင်ပထမဆုံး Firebase development workflow တစ်ခုကိုမည်သို့ဖန်တီးရမည်ကိုလေ့လာပြီးပြီဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ EmulatorUI ၏သွင်ပြင်လက္ခဏာများကိုသင်တွေ့လိုပါက GitHub တွင်ကျွန်ုပ်တို့ထံလည်ပတ်ပါ၊ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်ဤစီမံကိန်းသည်ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်ဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြproblemsနာများကိုကြည့်ပြီးသင့်ထံမှမေးမြန်းခြင်းများကိုနှစ်သက်သည်။ သတိရပါ၊ ဤသုံးစွဲသူမျက်နှာပြင်သည်အသစ်စက်စက်ဖြစ်သည်။
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်နိုင်သည့်အရာကဲ့သို့စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသောကြောင့်အနာဂတ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ထည့်နိုင်သည့်အင်္ဂါရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ပို၍ ပင်စိတ်လှုပ်ရှားမိသည်။
AppLocale ကိုကျွန်ုပ်မည်သို့ download လုပ်ရမည်နည်း။
ထည့်သွင်းနည်းAppLocaleWindows7နဲ့ Windows Vista လား။
Start button ကိုနှိပ်ပြီး cmd ကိုရိုက်ပါ။ Programs အောက်ရှိ cmd.exe ကိုတွေ့လိမ့်မည်။
Right Click နှိပ်ပြီး Run as administrator ကိုရွေးပါ။ အတည်ပြု window တွင် Yes ကိုနှိပ်ပါ။
apploc ကို run ပါ။ msi ဒီ command prompt မှတဆင့် - သင်၏ apploc လျှင်။ msi က“ အောက်မှာရှိတယ်။downloads'ဤ command သည်' C: \_ Users \_ user_name \_ ဖြစ်လိမ့်မည်။downloads\_ apploc ။ msi”
Apply ကိုနှိပ်ပါ။ Start ကိုနှိပ်ပါ။ ထို့နောက် Control Panel ကိုနှိပ်ပါ။ 'Clock, Language and Region' ကိုနှိပ်ပါ။ တိုင်းနှင့် Language ကိုရွေးပါ။ အုပ်ချုပ်ရေး tab ကိုနှိပ်ပါ။ Non-Unicode ပရိုဂရမ်များကဏ္အောက်ရှိ Change system locale ကိုနှိပ်ပါ။ ဂျပန်ကိုရွေးပါ။
၎င်းသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိမူလတန်းကျောင်းအရွယ်ကလေးများအကြားတွင်အကြိုက်ဆုံးဖြစ်သည်။ ဂျပန်ဘာသာစာသင်ခန်းအတွက်ဤဗားရှင်းသည် ၄ ​​င်းကိုလက်ဖြင့်လှုပ်ရှားမှုနှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ဘာသာစကားသင်ယူမှုလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်စေသည်။ ကျောင်းသားများသည်ဤဂိမ်း၏အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုနှင့်သူတို့၏ရွယ်တူချင်းများအတွက်ထူးဆန်း။ အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောရလဒ်များကိုတီထွင်ခြင်း၏ပျော်ရွှင်မှုကိုနှစ်သက်ကြလိမ့်မည်။ ၁ ။
အခန်းတစ်ခန်းစီ၏အစပိုင်း၌ကစားသမားများသည် katakana ဇာတ်ကောင်အသစ်များကိုသင်ယူနိုင်ရန်အတွက်ဂိမ်းသည်စနစ်တကျဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းနောက်သူငယ်ချင်းများနှင့်တိုက်ခိုက်ရန်အန္တရာယ်ရှိသောရန်သူများရှိပတ်ဝန်းကျင်ရှိပတ်ဝန်းကျင်ကိုစူးစမ်းလေ့လာရန်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ ဒါဟာ 'အသက်ရှင်ရန်ဂျပန်သင်ယူပါ!' အဆုံးစွန်သော - အန္တရာယ်ရှိရန်သူများကို
သင်၏ကျောင်းသားများပျော်စရာကောင်းလာသောအခါ၎င်းတို့သည်သတိမထားမိဘဲသင်ယူနေခြင်းဖြစ်သည်။ လှုပ်ရှားမှုမစတင်မီလှုပ်ရှားမှုနှင့်ဆက်နွယ်သောစကားလုံးများနှင့်စကားစုများကိုမိတ်ဆက်ပေးပါ။ ကျောင်းသားများသည်၎င်းတို့ကစားသောအခါ၎င်းတို့ကိုအသုံးပြုနိုင်သည် - ဂိမ်းတိုးတက်သည်နှင့်အမျှယင်းကိုသရုပ်ပြပါ။